ပုရိသတွေ အကြိုက်တွေ့နေတဲ့ အမိုက်စား ပုံစံလေးနဲ့ လန်းလွန်းနေတဲ့ ဖူးပွင့်သခင်ရဲ့ ညို့အားပြင်း ဗီဒီယိုလေး – Online News Post
ပုရိသတွေ အကြိုက်တွေ့နေတဲ့ အမိုက်စား ပုံစံလေးနဲ့ လန်းလွန်းနေတဲ့ ဖူးပွင့်သခင်ရဲ့ ညို့အားပြင်း ဗီဒီယိုလေး
ဒီ ဗီဒီယိုလေး ထဲမှာ တော့ ဖူးပွင့်သခင် က သီချင်းလေး အတိုင်း ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ အမူ အရာလေး တွေ နဲ့ အထာ ကျကျ ဆော့ကစား ထား တာ ဖြစ်ပါ တယ်..။ ဒါ့ အပြင် အနက်ရောင် ကိုယ်ကျပ် ဝတ်စုံလေး ကလည်း သူမ ရဲ့ ပင်ကိုယ် အလှတရား တွေ ကို ပေါ်လွင် ပြီး ရင်ခုန်စရာ ကောင်းနေခဲ့ ပါ တယ်..။ ကဲ…. ပရိသတ်တွေ အတွက် မင်းသမီး ချောလေး ဖူးပွင့်သခင် ရဲ့ အလန်းစား tik tok လေး ကို ပြန်လည် ဖော်ပြ ပေး လိုက်ပါ တယ်..။မင်းသမီးချော လေး ဖူးပွင့်သခင် ကတော့ အောင်မြင်နေ တဲ့ အနုပညာရှင် တွေ ထဲမှာ တစ်ယောက် အပါ အဝင်ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်..။ ဖူးပွင့်သခင် က ဗီဒီယို ဇာတ်ကား တွေ များစွာ ရိုက်ကူး ပြီး ပရိသတ် တွေ ရဲ့ အချစ်တွေ ကို အပြည့် အဝ ရရှိ ခဲ့တာ ဖြစ် ပါတယ်..။
လက်ရှိ မှာ လည်း သူမ က အနုပညာ အလုပ်တွေ ကို ဆက်တိုက် လုပ်ကိုင် နေပြီး သရုပ်ဆောင် ကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်အောင် လည်း ကြိုး စားနေ တာ ဖြစ်ပါ တယ်..။ဖူးပွင့်သခင် က အရပ်အမောင်းလည်း ကောင်းသလို ဆွဲဆောင် မှု ရှိတဲ့ ပင်ကိုယ် အလှ တရားတွေ ကို ပိုင်ဆိုင် ထား ပြီး ချစ်စရာ ကောင်းသူလေး ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်..။လတ်တလော ကိုဗစ် ကာလလေး မှာ လည်း ပရိသတ် တွေ နဲ့ အဆက် အသွယ်မပြတ် သွား အောင် အပျင်း အပြေ tik tok လေး တွေ ဆော့ကစား ပြီး အမြဲ ဖော်ပြပေးပါ တယ်..။ ယခုမှာ လည်း သူမ ရဲ့ ပရိသတ် တွေအတွက် ချစ်စရာ tik tok လေး ကို တင်ပေး လာခဲ့ပါ တယ်…။
ဒီ ဗီဒီယိုေလး ထဲမွာ ေတာ့ ဖူးပြင့္သခင္ က သီခ်င္းေလး အတိုင္း ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိတဲ့ အမူ အရာေလး ေတြ နဲ႔ အထာ က်က် ေဆာ့ကစား ထား တာ ျဖစ္ပါ တယ္..။ ဒါ့ အျပင္ အနက္ေရာင္ ကိုယ္က်ပ္ ဝတ္စုံေလး ကလည္း သူမ ရဲ့ ပင္ကိုယ္ အလွတရား ေတြ ကို ေပၚလြင္ ၿပီး ရင္ခုန္စရာ ေကာင္းေနခဲ့ ပါ တယ္..။ ကဲ…. ပရိသတ္ေတြ အတြက္ မင္းသမီး ေခ်ာေလး ဖူးပြင့္သခင္ ရဲ့ အလန္းစား tik tok ေလး ကို ျပန္လည္ ေဖာ္ၿပ ေပး လိုက္ပါ တယ္..။မင္းသမီးေခ်ာ ေလး ဖူးပြင့္သခင္ ကေတာ့ ေအာင္ျမင္ေန တဲ့ အႏုပညာရွင္ ေတြ ထဲမွာ တစ္ေယာက္ အပါ အဝင္ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္..။ ဖူးပြင့္သခင္ က ဗီဒီယို ဇာတ္ကား ေတြ မ်ားစြာ ရိုက္ကူး ၿပီး ပရိသတ္ ေတြ ရဲ့ အခ်စ္ေတြ ကို အျပည့္ အဝ ရရွိ ခဲ့တာ ျဖစ္ ပါတယ္..။
လက္ရွိ မွာ လည္း သူမ က အႏုပညာ အလုပ္ေတြ ကို ဆက္တိုက္ လုပ္ကိုင္ ေနၿပီး သ႐ုပ္ေဆာင္ ေကာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေအာင္ လည္း ႀကိဳး စားေန တာ ျဖစ္ပါ တယ္..။ဖူးပြင့္သခင္ က အရပ္အေမာင္းလည္း ေကာင္းသလို ဆြဲေဆာင္ မႈ ရွိတဲ့ ပင္ကိုယ္ အလွ တရားေတြ ကို ပိုင္ဆိုင္ ထား ၿပီး ခ်စ္စရာ ေကာင္းသူေလး ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္..။လတ္တေလာ ကိုဗစ္ ကာလေလး မွာ လည္း ပရိသတ္ ေတြ နဲ႔ အဆက္ အသြယ္မျပတ္ သြား ေအာင္ အပ်င္း အေၿပ tik tok ေလး ေတြ ေဆာ့ကစား ၿပီး အျမဲ ေဖာ္ျပေပးပါ တယ္..။ ယခုမွာ လည္း သူမ ရဲ့ ပရိသတ္ ေတြအတြက္ ခ်စ္စရာ tik tok ေလး ကို တင္ေပး လာခဲ့ပါ တယ္…။
Previous post မြင်သူတိုင်း အသည်းတယားယားဖြစ်သွားစေမယ့် မော်ဒယ်လ် ချောကလျာရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး
Next post အသည်းယားစရာ အမူအရာလေးနဲ့ ရင်ဖိုဖွယ်အလှတရားတွေ ပေါ်လွင်နေတဲ့ ဆောင်းယွန်းစံရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး